Russia inotangazve Iraq, Kenya, Slovakia neSpain nendege, Afghanistan ndege dzinofanira kumirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Russia inotangazve Iraq, Kenya, Slovakia neSpain nendege, Afghanistan ndege dzinofanira kumirira
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Iraq Kuputsa Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Slovakia Kupwanya Nhau • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Russia inotangazve ndege kuenda kuIraq, Kenya, Slovakia neSpain, ndege dzeAfghanistan dzinofanira kumirira
Sekureva kwemamwe masosi eRussia, danho pamusoro pekugadzirira kwendege dzinogara dzisiri dzevanhu neKabul uye kupihwa kwavo nzvimbo dzakatarwa neanotakura nendege kuRussia haisati yaitwa. Zvichiri nguva isati yakwana kutaura nezve kutanga kwendege dzevagari ikoko nguva dzose.
Russia kutangazve basa remhepo nedzimwe nyika ina.
Ndege kubva kuMoscow kuenda kuKenya, Slovakia, Iraq neSpain dzinotangazve.
Hapana ndege kubva kuRussia kuenda kuAfghanistan parizvino.
Ichitsanangudza iyo yenyika inopesana-COVID dambudziko repakati, hurumende yeRussia yazivisa nhasi kuti Russian Federation ichavhurazve yakagara yakarongwa yevanofamba nendege neIraq, Kenya, Slovakia neSpain kutanga musi waGunyana 21, 2021.
"Russia inotangazve kushanda nendege neSpain, Iraq, Kenya, neSlovakia kubva musi waGunyana 21," vakadaro vakuru vehurumende yeRussia Federation teregiramu mugero.
Ndege dzinoenda kuEgypt neTurkey kubva kumamwe maguta eRussia - Pskov, Magadan, Murmansk, uye Chita, dzichatangwazve kubva munaGunyana 21.
Panguva imwecheteyo, zviremera zveRussia zvakaratidza kusada kwavo kudzoreredza vafambi kufamba nendege neAfghanistan.
Sekureva kwamamwe masosi eRussia, danho pamusoro pekugadzirira kwendege dzisiri dzevanhu ne Kabul uye kupihwa iwo maslotti kwavari muchirongwa neRussia mutakuri wendege haasati aitwa. Zvichiri nguva isati yakwana kutaura nezve kutanga kwendege dzevagari ikoko nguva dzose.
Kuti utangezve kutaurirana nguva dzose neKabul, danho rakakodzera remuzinda unoshanda richazodiwa kudzivirira kupinzwa uye kupararira kwehutachiona hweCOVID-19.
Zvese zvinodikanwa nhandare yendege inofanirwa kugadzirwa muKabul kutanga kuona basa revatariri vemumafambiro emhepo zvinoenderana nematanho epasi rese ekuchengetedza ndege.
Zvakataurwa kare kuti vakuru veTaliban vakazivisa chishuwo chavo chekutangazve kufamba kwemhepo neRussia neTurkey.